Sosochii hojidhabdummaa hir’isuuf taasifamaa jiru
Rakkoo hojidhabdummaa dargaggoota biyyattii hir’isuuf sosochiin addaddaa gama mootummaan fudhatamaa tureera.
Wayita ammaas karaa Ejensii Carraa Hojii Uumuufi Wabii Midhaan Nyaataa Federaalaa taasifamaa jiru shoora olaanaa kan taphaaa jiru ta’uu ragaaleen mul’isaniiru.
Gama kanaan dargaggoota hojidhabeeyyii gurmeessuun cehumsa teknoloojii interpiraayizii xixiqqaarraa gara manufaakcheriingiitti akka ol guddataniif ejensichi ciminaan hojjechaa akka tuureefi jiruudha, kan hubatame.
Bara 2009 keessallee naannolee biyyattii 8fi bulchiinsota magaalaa lama keessatti walitti hidhamiinsa gabaa uumameen interpiraayizonni dargaggootaa 110 omishaalee isaanii gabaaf dhiyeessuu danda’aniiru.
Obbo Asaffaa Farradee Daariktera ejensichaa yoo ta’an, hojii dhabdummaa dargaggootaa hir’isuuf walitti hidhamiinsa gabaa uumameen kutaaleen hawaasaa kuma kudha lamaafi 155 fudhachuu akka danda’an dubbatu.
Kanaaan ammoo galiin mili. 2 ol kan argame ta’uudhan, kan himani. Bu’aa gama kanaan galmaahaa ture keessatti dhibbeentaan 60 dubartootaan kan haguugame yoo ta’u yeroo ammaattis hojiilee garagararratti dargaggoota bobbaasuun rakkoolee hojidhabdummaa hanga tokko furuun danda’ameeraa, jedhu.
Dargaggoonni IMXn gurmaa’uun hojiilee kanneen akka huccuu hodhuu,sibiilaa tumuu, mukaa soofuu, hojii qonnaafi nyaata qopheessuurratti bobba’uun xiyyeeffannoon hojjechaa jiraasuusaanii himu. Kunimmoo dargaggootni asiin dura hojii malee dararamaa turan hedduunsaanii ija banachuu akka danda’an godheera jedhu.
Qophii igzibiishiniifi Baazaarii bara 2010 kana keessa magaalaa Finfinneetti tasifamaa turerrattis interpiraayizonni dargaggoota kanneenii moodela ta’an 190 ol naannolee hundarraa kan hirmaatan yoo ta’u, qaamoleen hawaasaa kuma 15 ol irraa fayyadamoo ta’uu akka danda’an ibsu. Kunimmoo hangam sochiin dargaggoota fayyadamoo taasifamaa jiru milkaa’aa akka jiru argisiisa jedhu.
Obbo Zannabee Kumoo ammoo Daariktara Olaanaa Ejensii Carraa Hojii Uumuufi Wabii Midhaan Nyaataa Magaalota Itoophiyaati. Akka isaan jedhanitti, sosochiin hojidhabdummaa dargaggootaa hir’isuuf taasifamaa jiru guddina ariifataa biyyattiin galmeessisuuf aggamtee jirtu dhugoomsuuf shoora olaanaa kan tapahatuudha.
Dargaggootni kaleessa rakkoo hojidhabdummaan hubamaa turan tattaaffii mootummaafi hawaasni waliin taasisaniin har’a fayyadamummaa isaanii mirkaneeffacuu akka danda’aniidha, kan ibsani.
Kanaanis dargaggootni hojiilee garagaraarratti bobba’anii bu’aa galmeessisaa jiraniifi moodela ta’an misooma gabaa keessatti adda durummaan akka hirmaatan isaan taasisee akka jirus ibsu. Kunimmoo galiisaanii guddifachuurra darbee misooma dinagdee biyyattiis akka utuban kan haala mijeesse ta’uusaati.
Dargaggoota hojii daldala gogaarratti bobba’anii jiran keessaa shamarree Raahel Alamuu ishee tokko yoo taatu, kanaan dura carraa hojii dhabuun maatiirratti hirkattee jiraataa akka turte dubbatti. Yeroo ammaa garuu deggarsa ejensichi taasiseefiin carraa hojii uummattee maatiishiif gargaarsa taatee jirti.
Kunimmoo meeshaalee kanneen akk kophee, korojoofi kkf gabaa dhiyeessuutiin jireenyashee akka fooyyeffattu taasisaa kan mul’isuudha. Kanaan boodas omishaalee qulqullina qaban gabaaf dhiyeessuun galiishii guddisuurra dabartee cehumsa gara indastiriitti taasifamaa jiru keessatti qooda fudhachuuf kan ishee gargaaru ta’uusaa hubachuun kan danda’amuudha.
Dargaggoonni biroos deggarsa mootummaan taasisaa jirutti fayyadamuun hojii uummachuuf sochii cimaa taasisuu akka qabanillee gorsiteetti. Aadaa hojii tuffachuu dhabamsiisuun dirqama dargaggoota hundaa ta’uusaa ibsasheerraa hubatameera.
Torban kana/This_Week 43548
Guyyaa mara/All_Days 1468328